Ihlathi Loft kwiDowntown Quebec City
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLouis
Phila ubomi baseKhanada ngeyona nto ibhetele (esandula ukulungiswa ngoNovemba 2017) ! Ulwamkelo oluphezulu kumbindi wedolophu yaseQuebec. Ibekwe kakuhle, yimizuzu nje ukusuka kwindawo yembali. Unokufumana kwakhona iindawo zokutyela kwaye unethuba lokupaka simahla (kuphela impelaveki ngoLwesihlanu ukuya ngoMvulo). Jabulela ukuhlala kwakho kwikamva!
Le ndlu ikwisakhiwo esikhuselekileyo esiza nenkqubo ye-intercom. Zonke izixhobo zombane onokuthi uzifune ziya kubonelelwa. Indlu nayo igcinwe kakuhle kwaye ihlaziyiwe. Igumbi lokuhlambela liza kunye neshawari yeceramic ene-multi-jet spray elungiswe kakuhle.
4.65 · Izimvo eziyi-611
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi611
Ummelwane uyamema kwaye ubekwe kwisitrato esiphithizelayo. Kukwakho neparc kumgama ozimitha ezingama-50 kuphela. Kufuphi nendlu, unokufumana iindawo zokutyela ezintle, iibhari, ii-pubs kunye nezindlu zekofu.
Izimvo eziyi-5 175
Ungaqhagamshelana nam nge-imeyile, umnxeba okanye imiyalezo ebhaliweyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quebec City